Dowladda Mareykanka oo Farmaajo iyo Rooble uga digtay inuu khilaafkooda dhaliyo qalalaase iyo dib u dhaca.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
War-saxaafadeed ay Waaxda Arrimah adibadda soo saartay ayaa lagu yiri “Iskaashiga hogaamiyayaasha Soomaalida, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Rooble – wuxuu muhiim u yahay in la xaqiijyo in dalka uu si dhaqso ah usoo dhameeyo hanaanka doorashada ee socda. Khilaafka hadda u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Rooble wuxuu halis u yahay inuu adkeeyo hanaankan, waxaana loo baahan yahay in loo xaliyo si deg deg oo nabad ah.”
Previous articleLiiska Musharixiinta Aqalka Sare ee ka soo jeeda Somaliland oo la soo saaray (Akhriso Magacyada)
Next articleSidee Cabdi Xaashi keligiis loogu xiray Kursi ka tirsan Aqalka sare..? (Xildhibaan Maareeye oo kashifay)